कांग्रेसले गर्यो आन्दोलनको घोषणा, ओली सरकारको निद हराम हुनेगरी ७७ जिल्ला नै तताउने - Rising Dainik
कांग्रेसले गर्यो आन्दोलनको घोषणा, ओली सरकारको निद हराम हुनेगरी ७७ जिल्ला नै तताउने
January 26, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on कांग्रेसले गर्यो आन्दोलनको घोषणा, ओली सरकारको निद हराम हुनेगरी ७७ जिल्ला नै तताउने
काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभा वि,घटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार बसेको बैठकले माघ १९ गतचे भ्रातृ संस्था, २४ गते शुभेच्छुक र ३० गते सबै जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
३० गते काठमाडौंका तीन जिल्लाको कार्यक्रम भने एकीकृत रुपमा हुने एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।
ओलीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना सहित १ वर्ष कै’द !
‘एमाले पार्टी सक्ने उद्धेश्यले आएका प्रचण्ड आफैं सकिए’ – नेतृ चौधरी
एकै परिवारका ९ जनाको पहिरोमा पुरिएर मृ’त्यु, दागबत्ती दिने कोहि भएन !
आइसोलेसनमा तातोपानी खाएर फर्किएका बिरामीको उपचार खर्च २ लाख